ALinks - Iphepha 3 - ukuhamba nokuhlala kwelinye ilizwe lethu sonke
Iibhanki ezilungileyo kakhulu eUganda
January 16, 2022 UKaruna Chandna imali, Uganda
Iibhanki zaseUganda zijongwe yiBhanki Kuu yaseUganda okanye iBhanki yaseUganda, ibhanki ephakathi yelizwe. Yibhanki karhulumente eyasekwa ngowe-1966. Ngaphandle kokulawula iibhanki zaseUganda, ikhuthaza
Iindawo ezilungileyo zokutyelela e-US
January 16, 2022 demi izinto zokwenza, i-USA
I-United States yaseMelika yindawo ethandwa kakhulu kukhenketho. I-USA yindawo ekuyiwa kuyo kwezinye zeendawo ezintle kubakhenkethi zehlabathi. Apha, sifumanisa ezinye zezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi eMelika
Uluhlu lweebhanki eVenezuela
January 16, 2022 UMaitri Jha iibhanki, Venezuela
Inkqubo enkulu yezemali yaseVenezuela ibonise ukukhula okukhawulezayo. Oko kwakuphakathi kweminyaka yoo-1950 nowe-1980. Lubonakalise ubukho bobuchule kumaziko alo. Ngo-1989, icandelo leenkonzo zezezimali lalibandakanya iibhanki zorhwebo ezingama-41. Ngama-23 amaziko anika inkxaso-mali kurhulumente,
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko e-UK? Iimbacu eUnited Kingdom
January 16, 2022 UAntika Kumari ababaleki, UK
Ukuba ufuna ukuhlala e-UK njengembacu, kuya kufuneka ufake isicelo sokukhuselwa okanye ukhuseleko e-UK. Uya kuba ubalekele uhlanga ukuze ulungele kwaye ungavumi ukubuyela emva ngenxa yakho
Ungawufumana njani umsebenzi eLos Angeles?
January 16, 2022 UMaitri Jha imisebenzi, los Angeles
Ukuba awungowaseCarlifonia okanye waseCaliforniacs, usengakhangela umsebenzi eLos Angeles kodwa awukwazi ukufumana imvume yokusebenza uwedwa. Ukuze ufumane umsebenzi eLos Angeles, kufuneka ube nomsebenzi
Ufumana njani umsebenzi eMzantsi Afrika?
January 16, 2022 UMaitri Jha imisebenzi, Mzantsi Afrika
Ukuba uzimisele ukuhlala eMzantsi Afrika, ngokuqinisekileyo uya kudinga isibonelelo somsebenzi ngaphambi kokusebenza kweli lizwe. Nangona kunjalo, ukuba unezakhono ezifanelekileyo, uyakufumana ngokulula imisebenzi ehlawula kakuhle. Abasebenzi bethutyana nabanemivuzo ephantsi, kwi
«Izithuba zangaphambili 1 2 3 4 5 ... 95 I zithuba ezilandelayo»